နယူးယောက်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ၏ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်နေ၍ဟု ဆို – H2Oupdatenews
နယူးယောက်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ၏ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်နေ၍ဟု ဆို
oungmarine11@outlook.com 21/12/2020	No Comments
နယူးယောက်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ IRC သည် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) စခန်းများအတွင်း စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် အသိအမှတ်ပြု လှုပ်ရှားခွင့်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရက အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၈ -ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ ကော့ခ်ဘဇားအခြေစိုက် ဒုက္ခသည်များ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာရုံး (RRRC) ၏ ထုတ်ပြန်သောစာတွင် အဆိုပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောြ်ပထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စာတွင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျှက်ရှိသော အစိုးရထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် RRRC ၏ တွဲဘက်ကော်မရှင်နာမင်းကြီး မိုဟာမက်ရှမ်ဆွတ်ဒေါ်ဇာက လက်မှတ်ရေး ထိုးထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
IRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီအမည်ရှိ အဖွဲ့အစည်းသည် ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ စောစာပိုင်း၌ FDMN ခေါ် ( အတင်းအဓမ္မ အိုးအိမ်ရွှွှေပြောင်းခြင်းခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ) တို့ ခိုလှုံရာစခန်းများတွင် Covid-19 ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု့ တားဆီးရေး အစိုးရ၏ အရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်များကို လျစ်လျူရှုကာ သတိပေးချက်များအပါအဝင် စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် RIC အဖွဲ့အစည်းအမည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို နောက်ထပ် သတိပေးချက် တစ်စုံတစ်ရာ မထုတ်ပြန်မချင်း ဆိုင်းငံ့ထားရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သတိပေးစာ၌ ဖော်ပြထားသည်ဆို၏။
ယခုအခါတွင် IRC ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်များ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း ရှိ-မရှိ မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ IRC က မတူညီသည့် စခန်းများတွင် ကွဲပြားသည် ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထုချေခဲ့ကြောင်း RRRC ကော်မရှင်နာမင်းကြီးက ပြောဆိုသည်။ ….
IRC ၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ မန်နစ်အေဂါဝဲလ်ကမူ ၎င်းတို့ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ စာမှာ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါရှိသော်လည်း ယမန်နေ့က (ဒီဇင်ဘာ ၂၀) ၌ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအတောအတွင်း အလုပ်ဆက်လုပ်နေကြောင်း၊ သို့သော် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအပြင် စခန်းများရှိ အခြားလုပ်ငန်းများအားလုံးကို လတ်တလော ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ၌ IRC လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများ ရှိနိုင်ကြောင်း IRC ၏ ဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာဖြစ်သူ မာယွတ်ဟာဆင် ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။ ….IRC ပေးပို့သည့် ရှင်းလင်းချက်ပါ အကြောင်းကြားစာကို RRRC က မရရှိသည့်အတွက် ရှုတ်ထွေးမှုဖြစ်ရကြောင်း၊ အခု စာကို တွေ့ရှိပြီးဟု သိရကြောင်း မနက်ဖြန်မှစ၍ လုပ်ငန်းများ အပြည့်အဝလုပ်ခွင့်ပြုရန် စာတွင် တိုက်တွန်းထား ကြောင်း IRC ၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ မန်နစ်အေဂါဝဲလ်က သတင်းထောက်များ၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားသည်။
((( Dhaka Tribune., December 21st, 2020,” Bangladesh suspends activities of New York-based IRC in Rohingya camps. By: Humayun Kabir Bhuiyan ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော် အောင် ကောက်နှုတ်သာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ ဂျီနိုဆိုက် စွပ်စွဲချက်နှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ။ အီသီယိုပီးယားအစိုးရအဖွဲ့၌တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသော WHO အကြီးအကဲအား အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အတိုင်ပင်ခံဟောင်းဖြစ်သူက ICC သို့ တိုင်ကြား
Next Next post: ရုရှား၏ Sputnik V သည် ဗြိတိန်မှ ဗီဇပြောင်း Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်အပေါ် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ဟု ဆို။ AstraZeneca လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိရောက်မှု ၉၅ ရာနှုန်းကျော်ရှိ.